IGambusia | Ngeentlanzi
Enye ye iintlanzi zasemanzini ukuba sinokwazisa kwi-aquarium yethu, ukuba sinomdla kolu hlobo lwamanzi echibini lethu iGambusia.
Le ntlanzi incinci inombala wesilivere, ekwabizwa ngokuba yintlanzi yengcongconi ngenxa yesantya sayo kunye nokukhanya kwayo, inento eyodwa phakathi kwabesini, kwaye loo nto yeyokuba abantu basetyhini banelinye lamaphiko abo angasemva amde kakhulu kwaye ajikeleze kunalawo eyindoda, Yalatha.
Iintlanzi ezibanjisiweyo bakwazi ukutshintsha umbala wemizimba yabo, ngendlela eya kuthi ihambelane kwaye ihambelane nalapho ikhoyo, ke ukuba i-aquarium yakho inezityalo ezininzi zasemanzini, intlanzi yakho encinci iyakutshintsha umbala wayo ukuze utshatise umhombiso wetanki lakho leentlanzi.
Ezi ntlanzi zivela eMelika, apho zifumaneka ngokubanzi, zidada emilanjeni nasemilanjeni. Ukongeza ekubeni, njengoko besesitshilo, iintlanzi zamanzi amatsha, ezi zilwanyana zinokuphila kumaqondo obushushu ahluka-hlukeneyo, ukusuka ekumelaneni neqondo lobushushu elingaphantsi kweqanda, ukumelana nokuphila kumaqondo obushushu aphezulu angaphezulu kwe-35 degrees Celsius.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba emva kokukhwelana, umntu obhinqileyo ngoyena uya kukhathalela inzala, kwaye ngokungafaniyo neentlanzi ezininzi ezibeka amaqanda, uzala amantshontsho akhe. Nje ukuba aba bazalwe, ubashiya bodwa ukuze bazinyamekele kwaye bafunde ukukhathalela amarhamncwa.
Ukuba ufuna ukuba nomzekelo wolu hlobo kwi-aquarium yakho yasemanzini, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ukutya kwabo kusekwe kwizibungu ezincinci kunye nezinambuzane, nangona ungazondla nge-algae kunye nezinye iintlobo zeemveliso eziluhlaza.
Ndicebisa ukuba ufumane ulwazi oluthe kratya malunga nezi zilwanyana, kunye nokunakekelwa kwazo, nxibelelana nengcali kwivenkile yezilwanyana eya kuthi ikwazi ukukunceda ngcono ukugcina i-aquarium yakho kunye nentlanzi ezincinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » IGambusia